काठमाडौँ- वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभा संसादमा निर्वाचित गर्नको लागि राजिनामा दिने घोषणा गरेक काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धर अहिले विवादित बनेका छन्।
पार्टी भित्रै पनि अहिले उनको विरोध भैरहेको छ। पार्टी भित्र र बाहिर मात्र नभएका अहिले उनी आफैले जितेर आएको निर्वाचन क्षेत्रका जनताबाट आलोचित भएका छन्।
‘उहाँको यो कदमले सायमि (मानन्धर)हरुको मात्र हैन, सम्पूर्ण नेवार जातिको टाउको निहुरिएको छ’, नेपालभाषामा लेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसको विरोधस्वरुप हामी थँहितिका मानन्धर समुदायले उहाँलाई दिएको सम्मान फिर्ता लिन्छौँ । किनभने उहाँ त्यो सम्मानका लागि लायकै होइन भन्ने तथ्य उहाँको गतिविधिले देखायो ।’
काठमाडौं ७ का रैथाने नेवार समुदाय उनी माथि आक्रोशित भएको बुझिएको छ। मानन्धर गुथिको एउटा धार्मिक कार्यक्रममा रामवीर मानन्धरलाई दिइएको सम्मान फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै उनी माथि आफ्नो आक्रोश प्रष्ट रुपमा राखेका छन्।
जनताले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थको लागि राजिनामा दिने कुरा प्रति मानन्धर गुथिले नेपाल भाषामा लिखित विज्ञप्तिनै निकालेको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज २५, २०७५११:४९
वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने कुराले नेकपाको नियमित कार्यसूचीनै प्रभावित !
सभापति देउवाको विदेश भ्रमण स्थगित !
नेकपा सचिवालय बैठकमा विदेश गएका नेताहरुले गरे विदेश भ्रमणको ब्रिफिङ
काे हुन् प्रदेश नं ६ का राष्ट्रियसभा सदस्य
एमाले र माओबादी वाम होइनन्: डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी (अर्न्तवार्ता)
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको यस्तो छ आजको भेटवार्ताको तालिका